Opposition supporters sing and dance in Africa Unity Square, Harare, Zimbabwe, Tuesday, June, 5, 2018. The party supporters were demanding electoral reforms ahead of a July 30 vote, the first since Robert Mugabe stepped down last year. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Opposition supporters run past past the parliament building in Harare, Zimbabwe, Tuesday, June, 5, 2018. The party supporters were demanding electoral reforms ahead of a July 30 vote, the first since Robert Mugabe stepped down last year. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Leader of the main opposition party in Zimbabwe, Nelson Chamisa addresses party supporters in Harare, Zimbabwe, Tuesday, June, 5, 2018. Demonstrators were demanding electoral reforms ahead of a July 30 vote, the first since Robert Mugabe stepped down last year. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
An opposition supporter prepares to march on the streets of Harare, Zimbabwe, Tuesday, June, 5, 2018. The opposition supporters were demanding electoral reforms ahead of a July 30 vote, the first since Robert Mugabe stepped down last year. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Leader of the main opposition party in Zimbabwe, Nelson Chamisa,in red, marches with party supporters on the streets of Harare, Zimbabwe, Tuesday, June, 5, 2018. The opposition supporters were demanding electoral reforms ahead of a July 30 vote, the first since Robert Mugabe stepped down last year. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
HARARE, Zimbabwe (AP) — Thousands of opposition supporters marched in Zimbabwe's capital on Tuesday to demand electoral reforms ahead of the July 30 vote, the first since Robert Mugabe stepped down last year.